Cookie waa feyl yar oo qoraal ah oo la soo dejisto laguna keydiyo kombuyuutarkaaga markii websaydhka la furo. Waxaan u adeegsanaa cookies si aan u soo aruurino tirakoobka oo aan ugu cabirno taraafikada bogga. Cookie-ku kuma jiro cinwaan IP ah noloshiisana waxtarka leh waa 6 bilood haddii aadan tirtirin. Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si kaliya bogagga internetka ee aad rabto loo oggolaado inay ku keydiso buskudka kumbuyuutarkaaga. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho mashiinka wax raadinta oo aad raadiso “gab buskudka” si aad ugu hesho cunto karinta biraawsarkaaga gaarka ah. Fadlan ogow in xaddidaadda marin u helka ‘cookies’ ay saameyn ku yeelan karto shaqeynta boggeena internetka.